linear လျှပ်စစ် actuator နှင့် hနှင့်wheel ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် Actuator > linear လျှပ်စစ် actuator နှင့် handwheel
linear လျှပ်စစ် actuator နှင့် handwheel
AOX-L ကို စီးရီး lတွင်eတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နှင့် hနှင့်wheel ဖြစ် သငျ့လျြောသော ဘို့ ပြောင်းလဲပစ် နှင့် Open-နီးစပ် တာဝန် ၏ ထိန်းချုပ်မှု နှင့် ဖြစ်စဉ် နည်းပညာ သို့ ခှဲစိတျကုသ ထိန်းချုပ်မှု vတစ်ဦးlves.AOX ရှိပါတယ် 23 နှစ်ပေါင်း ၏ စုပုံခြင်း တွင် အဆိုပါ လယ်ယာ ၏ အရည်ဖြစ်သော ထိန်းချုပ်မှု တွင်dustry.Accordတွင်g သို့ အဆိုပါ ကွဲပြားခြားနားသော တွင်quiey ၏ အဆိုပါ စျေးကွက်, ကျွန်တော်တို့ ရှိ ဖွံ့ဖြိုးပြီး တစ်ဦး စီးရီး ၏ lတွင်eတစ်ဦးr လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r နှင့် hနှင့်wheel. နှင့် ကျွန်တော်တို့၏ ကောင်းသော reputတစ်ဦးtion ဖြစ် gတစ်ဦးတွင်ed အားဖြင့် အဆိုပါ reliတစ်ဦးbility နှင့် stတစ်ဦးbility perဘို့mတစ်ဦးnce တွင် အဆိုပါ လယ်ယာ ၏ vတစ်ဦးlve အရည်ဖြစ်သော ထိန်းချုပ်မှု.
handwheel နှင့်အတူ AOX-L ကိုစီးရီး linear လျှပ်စစ် actuator များအတွက် 1. မော်တော်
AOX-L ၏စကေးစားပွဲပေါ်မှာ handwheel နှင့်အတူစီးရီး linear လျှပ်စစ် actuator စောငျ့ရှောကျဖို့ပိုအလိုလိုသိနှင့်အဆင်ပြေသောလမ်းညွှန်လှံတံပေါ်တွင် install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။
All-သတ္တု plug-in ကို installation ကိုသုံးပြီးအလွန်အမင်းဘက်ပေါင်းစုံ, အနိမ့်ပါဝါကို Microcontroller တွေနဲ့ Analog circuit ကိုရောထွေး control panel ကိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ထိထိရောက်ရောက် actuator မော်တာအပူနှင့်ထိန်းချုပ်မှုဘုတ်အဖွဲ့ခွဲထုတ်နိုင်ပါတယ်, အလွန် software နှင့်ဟာ့ဒ်ဝဲ Anti-jamming စွမ်းဆောင်မှုနှင့်အပူချိန်ခုခံတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။
ကျနော်တို့လယ်ကိုလျှောက်လွှာအတွေ့အကြုံနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ် industry.Years နှင့်ဆက်စပ်သောန်ဆောင်မှုများကိုပေးစွမ်းအရည်အသွေးမြင့်လျှပ်စစ် actuators.In ထို့အပြင်ဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်အထူးကုများမှာကျစ်လစ်သိပ်သည်းအကြမ်းခံ AOX-L ကိုစီးရီးများကို handwheel နှင့်အတူ linear လျှပ်စစ် actuator စတင်ရန် AOX enabled ထားပါတယ် ယုံကြည်စိတ်ချရသောစွမ်းဆောင်မှုနှင့် sophisticted ထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကသို့အပြည့်အဝပေါင်းစည်းနိုင်စွမ်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီနှစ်ပေါင်း 20 ကျော်အဘို့လျှပ်စစ် actuators များထုတ်လုပ်ရာတွင်ပါဝင်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ 60,000 လျှပ်စစ် actuators တွေရဲ့နှစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်နှင့်အတူ, ရင့်ကျက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာနှင့်ပြီးပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများရှိပါတယ်။
ကျနော်တို့တည်ငြိမ်မှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရစက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်လက်ရာမြောက်သောနည်းပညာအဖြစ်အဆင့်မြင့်ကိရိယာများဖြစ်ကြောင်းအခိုင်အမာ handwheel နှင့်အတူ AOX-L ကိုစီးရီး linear လျှပ်စစ် actuator ၏အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေးကိုသေချာ။ AOX အဆင့်မြင့်ကိရိယာများအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအရည်အသွေးကောင်းအာမခံထားသည့်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုအပေါ်တင်းကျပ်သောထိန်းချုပ်မှု, ဖွထောကျ။
မေး: ဘယ်လောက်ကြာငါ handwheel နှင့်အတူ AOX-L ကိုစီးရီး linear လျှပ်စစ် actuator ရဲ့နမူနာရဖို့မျှော်လင့်ထားနိုင်သလဲ
မေး: သင်ငါ့ကို handwheel အတူ AOX-L ကိုစီးရီး linear လျှပ်စစ် actuator အကြောင်းကိုပိုမိုအသေးစိတ်အချက်အလက်ပေးပို့နိုင်ပါသလား?
hot Tags:: linear လျှပ်စစ် actuator နှင့် handwheel, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်